Madaxtooyada Soomaaliya oo ka codsatay Qaramada Midoobey inay u casuunto Maamul Goboleedyada - Jowhar Somali Leader
Home Somali Madaxtooyada Soomaaliya oo ka codsatay Qaramada Midoobey inay u casuunto Maamul Goboleedyada
Madaxtooyada Soomaaliya oo ka codsatay Qaramada Midoobey inay u casuunto Maamul Goboleedyada
Iyadoo in dhawaalaba ay jireen warar sheegaya in Qaramada Midoobey ay diyaarineyso Shir ay isugu keeneyso Dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada, si looga arrinsado xaalada siyaasadeed ee dalka iyo doorashada sanadka 2021 ayaa markii u horeysay Madaxtooyada Villa Somalia magacawday Wakiil gaar ah oo ay u xil saartay diyaarinta arrimaha shirkaas.
Xog ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya in Madaxtooyada Villa Somalia ay magacawday Wakiil u qaabilsan arrimaha diyaarinta shirka lagu wado in dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ay yeeshaan dhamaadka bisha June.
Wakiilka loo xilsaaray diyaarinta shirka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu magacaabaa Prof. Najiib Sheekh C/kariin oo ka mid ah la Taliyeyaasha Madaxweyne Farmaajo.
Mas’uulka ayaa dhowaan qoraal uu u diray Kuxigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Rai Zenenga ugu sheegay in loo xil saaray inuu diyaariyo shirka dhamaadka bisha June 2020 dhex mari doona dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada, isagoo ka dalbaday iskaashi iyo taageero Xafiiska UNSOM iyo Xafiiska Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya.
Qoraalkaas oo nuqul ka mid ah ay heshay Jowhar.com ayaa looga dalbaday Qaramada Midoobey inay u casuunto Xogheynada Xafiiska Madaxweynayaasha dowlad Goboleedyada, lagana howl galo howsha diyaarinta shirkaas, iyadoo shir hordhac ay isugu imaan doonaan Xogheynada kala matalaya Xafiisyada Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, si loo diyaariyo ajandaha shirka Madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Arrinta ugu weyn ee la is weydiinayo ayaa ah halkii ay aheyd in dowladda Federaalka ay si toos ah martiqaad ugu dirto Maamul goboleedyada inay u marto Qaramada Midoobey, waxaana la weydiinayaa waxa iska bedelay mowqifka dowladda Federaalka ee ku aadanaa in Beesha Caalamka aanay arrimaha gudaha ee Soomaaliya faragelin, iyadoo la xusuusto eryintii Wakiilkii hore hore ee Qaramada Midoobey Nicholas Haysom markii uu ka hadlay rabshadihii ka dhacay Baydhabo dhamaadkii sanadkii 2018.